Kansarka: shucaac daaweyn shucaac ah kaas oo ku buufiya kansarka gudaha - Caafimaadka - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB »Kansar: shucaac daaweyn shucaac ah oo kaneecada ka buufiyo kansarka - Caafimaadka
Kansarka: shucaac daaweyn shucaac ah kaas oo ku buufiya kaansarka gudaha - Caafimaadka
Ugu yaraan waxaan dhihi karnaa waa iyada waqti aan waqti lahayn. Lix sano ka dib abuuristiisa, shirkadda Nanobiotix oo ay wadaagaan Laurent Lévy, oo aan samaynay sawirka waqtigeena, ayaa hadda heshay oggolaanshaha Yurub ee suuqa Hensify®, le taliyaha ugu horreeya ee "radiotherapy amplifier". Xakameyn yar oo ku taala daaweynta kansarka: 60% bukaannada ayaa hela daaweyn shucaac ah oo loo maro dariiqooda daryeel, taas oo ka dhigaysa qalliinka, tiirarka daaweynta bukaanka ee maxalliga ah.
• Waa maxay novelty this?
Si loo baabi'iyo burooyinka curyaaminta ah iyadoon la kordhin qiyaasaha shucaaca, farsamadu wuxuu isticmaalaa nanoparticles ee oksijiinta qiiqa, nooca diamonds saddex kun jeer ka yar tahay timo kuwaas oo haysta awooda sare ee nuugista Raajooyin. Maqaalkani wuu badiyaa sagaal laab laabasho shucaac ah heerka qanjirka, iyada oo aan wax laga beddelin qiyaasta ay heshay unugyada caafimaad ee ku hareereysan. Si kale haddii loo dhigo, waxay u ogolaataa pin lagu buufiyo cell duurjoogta gudaha. Todoba todobaad oo tijaabo caafimaad ah oo lagu xaqiijinayo tiknoolijiyada ayaa hadda socda, sagaal tijaabo oo kiniiniga ah ayaa ka bilaaban doona Maraykanka.
• Waa maxayxiisaha tiknoolijiyada?
In lagu dhufto burada qiyaasaha dareen-celinta ayaa la bixiyaa iyadoo la adeegsanayo shucaaca wuxuu kuu ogolaanayaa inaad noqoto mid wax ku ool ah iyada oo aan la kordhin qiyaasaha laga helo unugyada caafimaadka leh. Ama, marka ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo unugyada caafimaadka qaba (kuwa bukaanka aad u nugul ama tusaale ahaan meelaha xasaasiga ah) waxay u oggolaaneysaa in ay isticmaasho qiyaaso hoose markaad haysato waxtar leh daaweyn wanaagsan. Rajada weyn ee si aad uga sii xoog badnaato burooyinka qaarkood, ama inay awoodaan inay daaweeyaan dadka bukaanka ah ee aan wax faa'iido ah u lahayn. Goynta ka soo horjeeda fikradda daawada shakhsi ahaaneed, taas oo dabeecadda kaliya ay wax ka qabtaan tiro kooban oo shakhsiyaad ah, Laurent Levy ma sameeyo sharxi karaan si loo wanaajiyo farsamo caafimaad oo aad u heer sare leh, radiotherapy.
Oggolaanshaha suuq-geynta ayaa la siiyay si loo daaweeyo sarkhiga unugyada jilicsan. Daaweynta waxaa laga heli karaa cudurrada kale: kansarka madaxa iyo qoorta ee tijaabooyinka si fiican u sarreeya, gaar ahaan bukaanka waayeelka ah iyo kuwa jilicsan ee leh taageero liidata qaliinka iyo kiimoteraabiga. Waqtigaas, kansarrada qanjirka 'prostate', beerka, malawadka, iyo malaha naaska, maskaxda iyo sambabada ayaa ka faa'iideysan kara. Weli waqti hore ayay u tahay in la tixgeliyo carruurta, kuwaas oo sidoo kale u baahan kara shucaaca, farsamadu haddaba waxay ku dhowdahay in ay hay'adaha dhallinyaradu taageeraan.
• Guulo labajibaaran
Helitaanka calaamada CE-ga ee saxda ah danta nanomediska iyo gaar ahaan istiraatiijiyadda cusub ee Faransiiska 100. Waxa kale oo ay Nanobiotix ka dhigaysaa shirkadda ugu horreysa ee Faransiiska Biotechnology si ay u keento kaligeed, iyada oo aan ka jirin warshadda dawooyinka ee dhinaca dhinaceeda, badeecadeeda ka timaada wajiga jilicsan ee tijaabooyinka kiliinikada ee oggolaanshaha suuq geynta Yurub.
Kansarka: sababaha wanaagsan ee rajada loo qabo
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.notretemps.com/sante/actualites-sante/amplificateur-radiotherapie-pulverise-cancer,i192562
Cameroon - Iskaashatada Caafimaadka: Mashruuca Maalgelinta Maalgelinta Caalamiga ah iyo NGO Nutrition International ayaa bixiya bilyan doolar si loogu badbaadiyo ilmaha dhasha